बुधबारदेखि खाद्यान्नको पसल दिनभरि खोल्न दिइने
काठमाण्डौ । बुधबारदेखि दिनभर खाद्यान्न पसल सञ्चालन गर्न दिइने भएको छ । गृह मन्त्रालयले बिहान र बेलुका मात्र पसल खोल्दा भीडभाड बढी कोरोना संक्रमणको खतरा बढेपछि यस्तो निर्णय गरिएको बताएको हो। गृह मन्त्रालयका सह-सचिव केदारनाथ शर्माले प्रहरीलाई दिनभर खाद्यान्न पसल संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा निर्देशन दिइसकिएको बताए...
मोदीद्वारा भारतमा २१ दिन लामो लकडाउनको घोषणा
काठमाण्डौ । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २१ दिन लामो लकडाउनको घोषणा गरेका छन् । आज साँझ देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै उनले २१ दिन लामो लकडाउनको घोषणा गरेका हुन् । उनले आइतबार आफूबाट आह्वान भएको जनता कफ्र्यू सफल बनाउन सहयोग गरेकामा देशबासीलाई धन्यवाद समेत दिए । उनले अब भने देशभर २१ दिन लामो लकडाउनको...
ज्वरोका बिरामीलाई अस्पतालले रेफर गर्न नपाउने:ओपीडी, शल्यक्रिया र होलबडी चेकअप बन्द
काठमाण्डौ । कोभिड १९ संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामीहरुलाई कुनै पनि अस्पतालले अब रेफर गर्न नपाउने भएको छ। संक्रमणको आशंका गरिएका बिरामीले अनाहकमा दुःख पाएका निश्कर्ष निकाल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अबदेखि सम्बन्धित अस्पतालले नै छुट्टै फिभर क्लिनिक संचालनमा ल्याउनुपर्ने र त्यस्ता बिरामीलाई सोही क्लिनिकमा आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने...
स्वास्थ्य मन्त्रालयको कलसेन्टरमा २४ घण्टामै ५२३१ फोनकल
काठमाण्डौ । कोभिड १९ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थापना गरेको कल सेन्टरमा नागरिकहरुले थामिनसक्नु गरी कल गरिरहेका पाइएको छ । विगत २४ घण्टामा कल सेन्टरमा देशभरबाट ५ हजार २३१ वटा कल आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यो तथ्य प्रस्तुत गरिएको हो । यसले देशबासीमा कोभिड १९ को...
काठमाण्डौ ।भारतीय राजधानी दिल्लीमा विगत २४ घण्टामा कोरोना भाइरसको नयाँ सङ्क्रमण पुष्टि नभएको यहाँका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले मङ्गलबार बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री केजरीवालले आफ्नो ट्वीटर सन्देशमा भन्नुभयो, “विगत २४ घण्टामा दिल्लीमा कोभिड–१९ को नयाँ सङ्क्रमण भेटिएको छैन भने पाँच जना सङ्क्रमित विरामी उपचारपछि निको भएका...
उपत्यकामा खानेपानी सहज हुने, नपाइए फोन गर्नुहोस्(नम्बरसहित)
काठमाण्डौ । काकाकुल उपत्यका आजदेखि लकडाउनको अवस्थामा छ । ग्याँसको जोहो गरिसकेका आम मानिसहरुलाई यतिबेला पानी पो नपाइएला कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । कोरोना भाइरसकै सन्त्रासले लकडाउन भएपछि मुलुक नै सुनसान बनिरहेको छ, तर अरु बेला पनि पानीको आपूर्तिमा सकस भोगिरहेका उपत्यकाबासीका लागि लकडाउनमा अवधिभा भने पानीको कुनै अभाव नहुने भएको छ...
साल्ट ट्रेडिङ भन्छ-'निर्धक्क हुनुहोस्, खाद्यवस्तुको अभाव हुन्न'
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा भए पनि खाद्य आपूर्तिलाई भने सहज र नियमित रुपमा उपलब्ध हुने बनाइएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले ग्याँस, चिनी, नून लगायतका खाद्यसामाग्री अभाव नहुने बताउँदै अहिले सहज रुपमा बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिए । कम्पनीको ३ वटा आउटलेटबाट दैनिक ४०० ग्याँस...
कोरोना संक्रमणले राम्रो पनि गरेको छ, हेरौं ५ कारण
काठमाण्डौ । कोरोनाभाइरसको कारण विश्वभरका मानिसहरुले कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । कोरोनाभाइरसको संक्रमण र यसबाट मृत्युु हुुनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । कुुनै सहर विशेष मात्रै नभई अहिले पूरै देश नै लकडाउन भइरहेका छन् । हजारौ मानिस क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन् । विश्वको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । लाखौले रोजगारी �...
काठमाण्डौ । सरकारले आफूखुशी कोरोना राहात कोष स्थापनामा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोना रोकथामका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको मंगलबारको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जथाभावी कोष बनाउन नपाइने बताएका हुन् । कोरोना रोकथाम अभियानका लागि सरकारले ५० करोडको सुरुवाती कोष स्थापना गरेको थियो । सरकारबाट स्थापित...
सरकारका प्रवक्ता भन्छन्-'कफ्र्यू लाग्दैन, जनतालाई अनावश्यक दुःख दिइन्न'
काठमाण्डौ । सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले कफ्र्यू लगाउने कुनै तयारी नभएको भन्दै अफवाहको पछि नलाग्न आह्वान गरेका छन् । कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकपछि केहीबेरअघि संचारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनले अनावश्यक ढंगले जनतालाई दुःख दिन नहुने र अहिले कफ्र्यू नै...
फ्रान्सबाट आएकी युवतीसँगै यात्रा गर्ने १२५ नेपालीको पहिचान, सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिने
काठमाण्डौ । कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएकी नेपाली युवती चढेकी कतार एयरवेजको विमानमा दोहाबाट सँगै यात्रा गर्ने १२५ नेपालीको ठेगाना पत्ता लागेको प्रहरीले दाबी गरेको छ । फ्रान्सबाट दोहा हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षीय युवतीको स्वाब परीक्षण गर्दा आइतबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार भइरहेको छ । उनमा कोरोना...
अत्यावश्यक वस्तुको सरकारले नै होम डेलिभरी गर्ने, पसलमा भीडभाड नगर्न आह्वान
काठमाण्डौ । खाद्यवस्तुु, औषधीजन्य पदार्थ तथा एलपी ग्याँस बिक्रीवितरण हुुुने पसल तथा बिक्री कक्षहरु सदाझैं नियमित सञ्चालन हुुने भएका छन् । नेपालभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले आजदेखि एक हप्ताका लागि मुुलुुकभर लकडाउन लागूू गरे खाद्यवस्तुु, औषधीजन्य पदार्थ तथा एलपी ग्याँसको सहज आपूूर्ति हुुने...
प्रदेश १ सरकारद्वारा १० करोडको कोरोना कोष स्थापना, मन्त्रीहरुले एक महिनाको तलब दिने
विराटनगर । प्रदेश नं १ सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि १० करोडको कोष खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश नं १ कोरोना जनसुरक्षा कोष खडा गर्नुका साथै उक्त कोषमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट १० करोड रकम जम्मा गरेको छ । उक्त कोषमा मुख्यमन्त्री सहित मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुले एक महिनाको...
यी काम गरे कोरोनाले तपाईलाई छुनसम्म सक्दैन !
काठमाण्डौ । पूरै विश्वमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको त्रास नेपालमा पनि बढिरहेको छ । कोरोनाको घटना देखापरेसँगै नेपाली आकाशमा पनि कोरोनाको बादल मडारिएको छ । यो महामारीबाट बच्न र नियन्त्रण गर्न सरकार र विश्व स्वास्थ्य संगठनले विभिन्न उपायहरु अपनाउन सुुझाव दिएका छन् । जसलाई अपनाउने हो भने कोरोनाले तपाइरुलाई छुुन पनि सक्नेछैन । १. हातलाई सफा...
कोरोना आशंका गरिएका युवकको मृत्यु, पुष्टि हुन बाँकी
काठमाण्डौ । भरतपुर महानगरपालिकाले संचालन गरेको कोरोनाको उपचार हुने विशेष अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखिएका एक युवकको मृत्यु भएको छ । उच्च ज्वरो, रुघाखोकीबाट ग्रसित बनेका वीरगञ्जका ३० वर्षीय युवकको मंगलबार बिहान ७ बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालका अधिकारीहरुले बताएका छन् । विगत केही दिनअघिदेखि निरन्तर उच्च ज्वरो र...